ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သမီးငယ်ကို အင်အားပြည့်ဝနေစေဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲ - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » မိဘများအတွက်လမ်းညွှန် » ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သမီးငယ်ကို အင်အားပြည့်ဝနေစေဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲ
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သမီးငယ်ကို အင်အားပြည့်ဝနေစေဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲယခုဆောင်းပါးသည် ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ရေးသားထားသောဆောင်းပါးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြော်ငြာနှင့်ပံ့ပိုးမှုမူဝါဒအချက်အလက်များကို ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
သားသမီးတွေကို မျက်ခြည်ပြတ်မခံ အမြဲတစေစောင့်ကြည့်နေတတ်တာကမေမေတွေပါ။ အမူအရာလေးတစ်ခုခုပြောင်းလဲနေရင်တောင် စက္ကန့်ပိုင်းနဲ့ သိကြတဲ့သူတွေပေါ့။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နားလည်မှုအပေးနိုင်ဆုံးကလည်းမေမေတွေပါပဲ။မေမေတစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါ ကိုယ့်သားသမီးလေးကို အချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့်တာက မသိလိုက်ဘဲနဲ့တောင်လုပ်နေမိတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အခါ သမီးလေးက ကျန်းမာပျော်ရွှင်နေရင် ကိစ္စမရှိပေမယ့် သမီးလေးကြည့်ရတာ ပင်ပန်းနေပုံပေါက်နေရင် အနည်းနဲ့အများတော့ စိတ်ညစ်မိမှာပါ။
ကလေးဘဝက အရာရာက ဘာမှ အပူအပင်သိပ်မရှိတော့ ပူပင်စရာမရှိဘူးပေါ့။ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ ကျက်ရတဲ့စာတွေကများလာတယ်။ တာဝန်တွေက ကြီးလေးလာတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ သမီးမိန်းကလေးတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့ အပြောင်းအလဲက သားယောက်ျားလေးတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့ အပြောင်းအလဲထက်ပိုများပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် စိတ်ပင်ပန်းရသလို အပျိုဖော်ဝင်စမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ ရာသီသွေးစပေါ်တဲ့ပြဿနာကလည်း သမီးလေးတွေကို ပိုပင်ပန်းစေတာပါနော်။ ဒီအချိန်မှာ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ဖွံဖြိုးပြောင်းလဲမှုကြောင့် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓါတ်တွေကလည်း ပိုများလာမှာပါ။ ဒီအနေအထားကိုမေမေတို့ကကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့လိုပါမယ်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ကလေးတစ်ယောက်အဖို့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေက များပါတယ်။ မူလတန်းကနေ အလယ်တန်းကိုပြောင်းတဲ့ ပညာရေး၊ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခန္ဓါကိုယ် အချိုးအဆစ်၊သွေးသားပြောင်းလဲမှုနဲ့ စိတ်အခြေအနေပြောင်းလဲမှု၊ လူဝင်ဆံ့ချင်လာတဲ့ စိတ်အခြေအနေ စတာတွေက သမီးလေးတွေ ကြုံတွေ့ရမယ့် စိန်ခေါ်မှုတွေပါ။ ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကို အကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်စေဖို့ဆိုရင်မေမေတို့ဘက်က သမီးလေးတွေကို အခုလိုလေးဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုပါမယ်။
ခန္ဓါကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေပြည့်စေဖို့က မနက်စာကို မဖြစ်မနေစားဖို့လိုမှာပါ။ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခန္ဓါကိုယ်အတွက် အာဟာရပြည့်ဝဖို့လိုနေတဲ့ သမီးလေးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ ပိုလို့တောင်လိုအပ်ပါဦးမယ်။ ဒါကြောင့် မနက်စာကို ပေါင်မုန့်၊ ထမင်းကြော်၊ ကြက်ဥကြော်၊ ကွေကာအုပ်စတဲ့ အစားအသောက်တွေကိုအာဟာရပြည့်အောင်ပြင်ပြီး သမီးလေးကိုကျွေးမွေးပေးပါ။
ခန္ဓါကိုယ်မှာရေဓါတ်ပြည့်နေစေဖို့ ကလေးကို တစ်နေ့ရေ ၇ ခွက်ကနေ ၈ ခွက်လောက်အထိတိုက်ပေးပါ။ရေဓါတ်ပြည့်အောင်ဆိုပြီး အားဖြည့်အချိုရည်တွေ၊ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ အချိုရည်တွေတိုက်တာမျိုးတော့ မလုပ်ပါနဲ့။ရေကအကောင်းဆုံးပါ။ ဒါကြောင့် ကလေးကို သွားလေရာရေဗူးလေးထည့်ပေးပြီး ရေသောက်ဖြစ်အောင် ဂရုစိုက်ပါ။
အရိုးတွေဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားတဲ့ အရွယ်မို့ ကယ်လ်ဆီယမ်လိုအပ်ချက်ကလည်း မြင့်မှာပါ။ သမီးလေးတွေက အသက် ၂၀ ကျော်လောက်အထိ အရိုးတွေ ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်တာကြောင့် အရိုးတွေ သိပ်သည်းဆကောင်းကောင်းနဲ့ အကောင်းဆုံး ဖွံ့ဖြိုးနိုင်စေဖို့ ကယ်လ်ဆီယမ်ကို အကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးရပါမယ်။ ကယ်လ်ဆီယမ်ဖြည့်ထားတဲ့ နို့၊ သစ်သီးဖျော်ရည်။ ကွေကာအုပ်စတာတွေ တိုက်ပေးလို့ရပါတယ်။ အဆီထုတ်တဲ့ သောက်စရာတွေဖြစ်ဖို့တော့ ဂရုစိုက်ရပါမယ်။
ရာသီသွေးဆင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်အတွက် သံဓါတ်လိုအပ်ချက်က ပုံမှန်ထက်ပိုလိုအပ်လာမှာပါ။ ဒီအချိန်မှာ ပြည့်မီအေင် ဖြည့်ပေးနိုင်မှလည်း ကလေးက သံဓါတ်အားနည်းတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ မောပန်းလွယ်တာ၊ နုံးချိတာနဲ့ သွေးအားနည်းရောဂါတွေမဝင်လာမှာပါ။ ဒါကြောင့် ကလေးကို သံဓါတ်ပါဝင်မှုများတဲ့ အစားအသောက်တွေကျွေးပေးဖို့ လိုပါမယ်။ ၉ နှစ် ကေနေ ၁၃ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့ကို သံဓါတ်ပမာဏ ၈ mg အထိလိုအပ်ပြီး ၁၄ နှစ် ကနေ ၁၈ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက်ကတော့ တစ်နေ့တာမှာ သံဓါတ် ၁၅ mg အထိလိုအပ်ပါမယ်။ သံဓါတ်ရစေဖို့ အသည်း၊ အနီရောင်အသား၊ ဥအမျိုးမျိုး၊ ဟင်းနုနွယ်စတာတွေကိုကျွေးမွေးပေးဖို့လိုမှာပါ။ တကယ်လို့ ကလေးက သက်သတ်လွတ်ပဲစားတယ်၊ အသားငါးမစားဘူးဆိုရင်တော့ သံဓါတ်လိုအပ်ချက်ပြည့်မီဖို့ အခက်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ အကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့အတွက် ခေါင်းခဲနေပြီဆိုရင်တော့ အပျိုဖော်ဝင်စ သမီးလေးတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေပြည့်မီအောင်ထည့်သွင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Appeton ရဲ့ Ms. Teen ရှိပါတယ်။ ခန္ဓါကိုယ်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပရိုတင်း၊ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေအပြင် အရိုးဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ်၊သွေးအားနည်းပြဿနာကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ သံဓါတ်စတာတွေပါဝင်တာကြောင့် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေပြည့်ဝအောင်ဖြည့်ပေးနိုင်မှာပါ။
ကလေးကို တစ်ချိန်လုံးဖြစ်စေချင်ဇောနဲ့ စာကျက်ဖို့ကျောင်းတက်ဖို့၊ကျောင်းပြင်ပ သင်တန်းတွေတက်ဖို့ အတင်းကြီးဖိအားမပေးပါနဲ့။ ကလေးကိုယ်တိုင်က လိုလိုလားလားတက်ချင်တာမျိုးကိုပဲပေးတက်ပါ။ ကလေးအတွက် တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ပြည့်ပြည့်ဝဝအနားယူနိုင်မယ့် ကိုယ်ပိုင်ချိန်လေးပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့။ ခန္ဓါကိုယ်မှာရင်ဆိုင်ရတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေကို လက်ခံနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်အဖို့ သူစိတ်ဝင်စားတာကို လုပ်ဖို့နဲ့ပြည့်ဝစွာ အနားယူနိုင်ဖို့ တစ်နေ့တာမှာ အနည်းဆုံး ကိုယ်ပိုင်အချိန် နာရီဝက်ကနေ ၄၅ မိနစ်အထိလိုနိုင်ပါတယ်။
ကလေးကိုရေပုံမှန်ချိုးတာ၊ခေါင်းလျှော်တာနဲ့ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် လိုက်နာသင့်တဲ့ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးတွေကိုမေမေက ဂရုစိုက်ပေးပါ။ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အဖို့ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး ဂရုစိုက်ဖို့က အခြားသူတွေထက်ပိုလိုအပ်လာပြီဖြစ်တာကြောင့် စမတ်ကျကျလေဒီလေးဖြစ်စေဖို့မေမေတို့ကသေချာလေးဂရုစိုက်ပေးရမယ့်အရွယ်ပါ။ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးက စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းစေဖို့ အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
အခုပြောခဲ့တဲ့ အချက်လေးတွေကိုသေချာလေးဂရုစိုက်ပေးလို့ ကိုယ့်ရဲ့ သမီးလေးကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာ အားအင်ပြည့်နေစေဖို့ ဂရုစိုက်လိုက်ပါမေမေတို့ရေ………….
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ အောက်တိုဘာ 10, 2019 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း နိုဝင်ဘာ 7, 2019